#PowerOfMore Global Week of Action: Zimbabwe - GFAN Asia Pacific
Find out about the global fund's investments in Zimbabwe
Find out about zimbabwe's investments in the global fund
zimbabwe's scorecard on domestic financing for health
Zimbabwe is both an implementer and a contributor to the Global Fund.
Since 2001, Zimbabwe has contributed a total of US$ 3.11 million to the Global Fund to date, and at the Sixth Replenishment of the Global Fund pledged US$ 1 million demonstrating its commitment and solidarity to the Global Fund partnership.
Zimbabwe has been a recipient country of the Global Fund since 2004 and has been disbursed over US$1.942 billion for HIV, RSSH, Tuberculosis and Malaria. In addition, Zimbabwe is part of the following Global Fund multicountry grants – Multicountry Africa ECSA-HC, Multicountry Southern Africa E8, Multicountry Southern Africa HIVOS, Multicountry Southern Africa SADC, Multicountry Southern Africa TIMS, Multicountry Southern Africa WHC.
The Office of Inspector General conducted an audit of Global Fund Grants in Zimbabwe released on 26th March 2020 which concluded that despite a prolonged economic crisis, Zimbabwe has made significant progress in the fight against the three diseases.
The action in Zimbabwe is led by the Community Working Group on Health (CWGH) with the support of the following partners.
Colleagues in Zimbabwe met on 9th March 2022, Wednesday at the Community Working Group (CWGH) Offices working with young people to physically fold the Origami paper cranes and elephants for the action to distribute the letters to Embassies of donor countries on the 10th and 11th March 2022.